Apple neGoogle vanobatana nemauto uye votanga kubatana COVID-19. chishandiso chekutarisa. | Kubva kuLinux
Apple neGoogle Chikwata Kumusoro uye Votanga Joint COVID-19 Yekushandisa Yekushandisa Chingave Ichi Mugumo Wekuvanzika?
Kwese kwavanotaura nezvazvo dambudziko riripo iro rinoonekwa ne denda reCoronavirus (Covid-19) uye haifanirwe kutorwa zvishoma, kubvira mamiriro acho akawedzera Uye nyika zhinji dzave kutanga kutendeukira kunzira dzakasiyana siyana dzekuparadzanisa vanhu uye zvakare kukwanisa kuteedzera vanhu kuti vaone kana vakafumurwa kune mumwe munhu ane COVID-19.
Tatarisana nemamiriro ezvinhu aya, Apple neGoogle vachangobva kuzivisa kuvhurwa kwe mubatanidzwa wekuitwa kwemhinduro mubatanidzwa unobvumira hutachiona kutevedzwa zvakanyanya
Muchokwadi, uku kusanganisa kwekuedza kunoguma nekuitwa kwe "mhinduro yakakwana kusanganisira application programmes nzvimbo (API) uye tekinoroji yekushandisa padanho rekubatsira kuteedzera kuteedzana. "
Tichifunga kukurumidzira, makambani anozivisa kuti chirongwa ichi chichaitwa mumatanho maviri.
Kutanga, muna Chivabvu, makambani maviri achaburitsa maAPI anogonesa kubatana pakati peaApple neApple zvishandiso vachishandisa maapplication kubva kuzviremera zvehutano zveveruzhinji. Izvi zvinoshandiswa zviri pamutemo zvichave zviripo kune vashandisi kurodha kuburikidza nezvitoro zvavo zvekushandisa
Chechipiri, mumwedzi iri kuuya, Apple neGoogle vachashanda kugonesa yakakura Bluetooth-yakavakirwa yekutevera yekutevera chikuva nekubatanidza iko kushanda kune ese mapuratifomu.
Zvinoenderana nemakambani maviri aya:
"Iyi ndiyo mhinduro yakasimba kudarika API uye inogona kubvumira vanhu vazhinji kutora chikamu, kana vakasarudza kujoina, pamwe nekubvumidza kudyidzana necosystem hombe"
Ichi chiziviso chinoratidzika kunge chiri panguva chaiyo, sezvo manyorerwo ekuteedzera kunyorera akaitwa kune veruzhinji vakaratidza miganho, nekuti havana kubvumidza kuchinjaniswa kwedata kuburikidza neBluetooth pakati peiApp neApple zvishandiso.
Vatsvakurudzi veMIT vakaunza kubatana kwekutsvaga application vachishandisa Bluetooth mazuva mashoma apfuura seApple's Tsvaga Yangu system zvakare vakaziva kuti kuitira kuti chishandiso ichi chibudirire mazita makuru muhunyanzvi anofanirwa kushanda pamwechete.
Nezve basa reichi chikumbiro, inotaura kuti:
Zvinoratidza zvinoshandura yega yega maminetsi gumi neshanu y kana munhu uyo anoshandisa applicationn inonzi yakanaka kune coronavirus, nemvumo yekuwedzera, iko kunyorera kunoendesa zvitupa zvako mukati memazuva gumi nemana apfuura kune server yehutano agency.
Kana pakati pevanofambidzana, mushandisi aine yeruzhinji application yehutano, kunyorera kwake kunotora kiyi dzemushandisi akaedza akanaka uye iko kunyorera kunokunyevera kuti wanga uchitaurirana nemunhu anonzi akanaka.
Zvino, kurudziro dzinozoitwa kune vekupedzisira kuitira kuti agone kutora matanho akakodzera mune ramangwana.
Kana iri chikamu chechipiri, inosanganisira kusanganisa chishandiso bata yekutevera padanho repasi pamaitiro eApple uye iOS anoshanda. Kubatsira kwemhinduro iyi yechipiri ndechekuti yaizodzivirira vashandisi kudhawunirodha zvikumbiro zvekuteedzera zvinopihwa nevamiriri vehutano.
Naizvozvo, kunyangwe kana munhu asina kurodha pasi app kubata kutsvaga, chimbo chekuzvarwa ichi chichivatendera, nemvumo yako, tevera vokukurukura uye zvakare kuteverwa.
Chekupedzisira, kunyangwe kana zano uye maitiro echikumbiro achikunzwa, kunetseka kunomuka nevashandisi vazhinji, seApple neGoogle zvisingatariswe sevanonyanya kutaura kuti zvakavanzika zvinovimbiswa.
Kunyangwe, kupihwa mamiriro acho, vashandisi vazhinji vanotendawo kuti inogona kunge iri yekupedzisira zviwanikwa kukwanisa kutora mukana wehunyanzvi kurwisa zvakanyanya sezvingabvira kudzikisira huwandu hwevanhu vakabatwa nehutachiona uye kukwanisa kupatsanura munguva yakafanira avo vese vaisangana nevanhu vane hutachiona.
Asi matambudziko mazhinji anomuka kunyangwe kuvanzika kuchisara kumashure, sezvo painewo mamiriro akasiyana apo isingakwanise kushanda, semuenzaniso, munyika dzisina kusimukira, nevanhu vanogara mumafurati (nekuti iko kushanda kunoongorora) Kuwedzera kune chokwadi kuti protocol yeBluetooth inoonekwa seimwe yevanonyanya kutambura uye pano pane avo vanoda kutora mukana wemamiriro ezvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Apple neGoogle Chikwata Kumusoro uye Votanga Joint COVID-19 Yekushandisa Yekushandisa Chingave Ichi Mugumo Wekuvanzika?
Zvekuvanzika zvakaguma kubvira kuvapo.
Uye chokwadi, kuvanzika vs kugara zvakanaka uchifunga kuti kune vanhu vasina hanya nekukanganisa vamwe, kuvanzika ndicho chinhu chidiki izvozvi
Rusununguko rwakawanda rwakavhiringidzwa nehunhu mazuvano
ROSA Mufananidzo Munyori: Nyore maneja yekupisa ISO mifananidzo kune USB